DVD ayaa caan ku ah awoodda weyn, reading lagu kalsoonaan karo, iyo isticmaalka cimri dheer, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah DVD-dhexaad ah kaydinta ugu muhiimsan ee dunida ugu digital. Si kastaba ha ahaatee, daawashada filimada DVD on your computer, DVD ma noqon karaan ikhtiyaarka ugu fiican. Oo ilaalinta qaali ah DVD disc asalka, dayanayaan DVD in AVI u fudud daawashada on PC sii caan ah.
Gacan-jabis taageertaa MKV iyo MP4 qaabab, waxa kale oo aad isticmaali kartaa gacan-jabis si loogu badalo MKV, AVI, ama MP4 in MKV.
Fiiro gaar ah: diinta DVD in AVI (Vxid codec) la gacan-jabis, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo version wayn ee gacan-jabis sida 0.9.2. Wixii 0.9.3 ama kor ku xusan, weelka AVI iyo codec yihiin hoos. Sidaas darteed, waxaan u hadlayaan sida ugu safrayaan uu kelmadaha DVD in AVI. Tayada video ayaa laga yaabaa dhinaca hoose.
Waxa aad u baahan doontaa in aad nuqulka DVD in AVI:
Gacan-jabis, (waayo Windows, Linux, iyo Mac)
Disc DVD ayaa aad rabto in aad nuqul in AVI
Enough meel disk free
Gacan-jabis in AVI Tallaabo 1: Dooro il DVD ah
Ka dib markii download iyo rakibi gacan-jabis , abuurtaan gacan-jabis iyo riix "Source" button on top in la furo wada hadal DVD drive caleenta ah. Halkan ka dooro folder VIDEO_TS.
Fiiro gaar ah: Microsoft .net Framework 3.5 SP1 yaabaa in loo baahdo, iyo sidoo kale waa in lagu dhejiyaa xitaa haddii .net Framework version 4 waxaa lagu rakibay, sababtoo ah version 4 ma aha gadaal socon.
Gacan-jabis in AVI Talaabada 2: ka dhig AVI saarka goobaha
Hadda dooro Jidka wax soo saarka adigoo riixaya "Browse" button iyo dooran gal ah ku saabsan disk adag.
Next, dooran horena a ka mid ah liiska horena gacan-jabis on xaq. Maxaa yeelay, waxaad nuqul ka DVD in AVI loogu daawashada on your computer, "Profile High" talinayaa. Laga bilaabo tan horena profile, bedesho dhimaya video, si loo waafajiyo baahidaada ah.
Haddii aad rabto in badan oo ku saabsan qaababka gacan-jabis ogahay, kaliya akhri maqaalkan ku Best gacan-jabis Settings u Hawlaha Universal .
Beegyada uu soo socda u baahan tahay in la bedelo u dayanayaan in AVI DVD :
1. Laga soo bilaabo Title liiska hoos-hoos, dooro movie ugu weyn. (Talooyin: movie ugu weyn ee sida caadiga ah muddada ugu dheer)
2. Tag Video tab, oo ka mid ah liiska hoos-hoos Video codec, MPEG4 dooro (FFmpeg).
3. Tag tab Audio, dooran audio ee aadan rabin oo guji badhanka saar. Sidoo kale, u tag tab Cinwaan uga saarto subtitles aan waxtar lahayn si loo yareeyo xajmiga video.
4. trick ayaa sixir: beddelo dheeraad ah magaca file in .avi duurka meel loo ahaadana iyadaa u.
Gacan-jabis in AVI Tallaabo 3: Ka billow diinta ama diinta
Hadda, waxaa la gaaray waqtigii aad nuqulka DVD in AVI kombiyuutarka. Si fudud riix "Start" button. Haddii aad qabto horyaal badan si dooxi doontaa, riix "Add to safka" button saf oo hawsha ka "Encode safka" wada hadal bilaabaan.
Gacan-jabis AVI Talooyin:
1. files AVI gediyay ayaa weli encoded la MPEG-4 codec, sidaas tayada video ah malaha dhinaca hoose marka la barbar dhigo encoded la Xvid. Si loogu badalo DVD in AVI leh tayo wanaagsan leh, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Video Converter si ay kuu caawiyaan.
Digniin nuqul 2. DVD: Guud ahaan, waa in ay caadi yihiin in ay dib u kor DVD in aad leedahay qof la isticmaalo, laakiin ma nuqul ka cajalladaha DVD aan ahayn kuwaaga ah. Fadlan tixraac aad sharciga deegaanka hor dayanayaan DVD in AVI by buugan.
> Resource > DVD > gacan-jabis AVI: Sida loo Copy DVD in AVI Isticmaalka gacan-jabis